အနျတီ သီတာ – My Blog
ကတြျောဆယျတနျးဖွပွေီးတော့… အလုပျလုပျရနျ..ရနျကုနျမွို့သို့.. တကျလာပါသညျ။ဦးလေးအိမျရောကျတော့.. ဦးလေးမိနျးမ..မ သီတာနဲ့ပဲတှတေ့ယျ.. သူ့ယောကျကြား…အညာဘကျမှာ.. အာလူး ၊ကွကျသှနျသှားတငျတယျ။ ဦးလေးပွနျလာမှ..အလုပျရှာပွော တယျ။ ခဏနတေော့..ဦးလေးဆီဖုနျးဆကျတယျ.. ကတြျောရောကျနတေဲ့အကွောငျး… ဘာတှပွေောလဲတော့..မသိဘူး။ပွီးမှ..” မငျး မငျး ရေ..နငျ့ဦးလေးက..အိမျမှာပဲနေ.. ဘယျမှမသှာနဲ့တဲ့..ငါ့နဲ့လောလောဆယျ.. ဈေးဝိုငျးရောငျးတဲ့..သူ ပွနျလာရငျ..အလုပျရှာပေး မယျတဲ့”.. ”ဟုတျ..မမသီတာ..”ကတြျောက.. တောကတကျလာတဲ့သူဆိုတော့.. ရနျကုနျအိမျလေးက..ကတြော့အတှကျ ကဉျြးနေ သလိုပဲ…ဘယျတကျနိုငျမလဲ.. ကိုယျကအလုပျလုပျခငျြတာကို… ရပျကှကျ ဆိုငျဆိုတော့.. ဝယျသူတော့မြားသား… တနတေ့ နေ့..ဈေးရောငျးလိုကျ.. အိမျအလုပျကူလုပျလိုကျနဲ့..အခြိနျတှေ ကုနျနတေယျ
ဦးလေးနဲ့မသီတာ.. အိမျထောငျကွတာ..၃..နှဈလောကျရှိပွီ.. ကလေးမရသေးဘူး. မသီတာက..မှနျ.စပျတဲ့သဘောရှိတယျ.. အသား လညျးဖွူတယျ..လကျပွတျ.. ခါးတိုဝတျတော့.. လကျမောငျးသားတှကေ..ပွညျ့တငျး ဝငျးဝါတယျ..ခါးကသိမျပွီး..တငျသားမြားက.. ထငျရှားစှာ..ပျေါလှငျနတေယျ..ဖငျကွီးတှေ.. ကော့ပွီး..တုနျခါနတေယျ..ကတြျောလညျး.. လူပြိုဝငျကာစဆို တော့..ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျကို.. စိတျဝငျစားစှာ. .ကွညျ့ တကျနပွေီ…ဈေးရောငျးပွီး မှခကျြပွုတျစား သောကျကွသလို.. တခါတရံ တော့.. ခကျြရငျးဈေးရောငျးတယျ..ရုံးပိတျရကျဆို.. ပို ရောငျးရသလို.. ဆိုငျလညျးစောစောပိတျတယျ.. အဲလိုနမြေိုးဆိုရငျ..မ သီတာ..နဲ့..ထမငျးအတူစား ဖွဈကွတယျ..”အမ..ကလေးမယူဘူးလား.. ”ခု တော့..ယူထားတယျ.. ရ..မရတော့.မစဈရသေးဘူး..”
အိမျထောငျသညျမှနျး မသိသာဖူးနျော..အမက..အပြိုတိုငျးပဲ. .”မ ဟုတျတာမငျးမငျးရယျ..” တကယျပွောတာ..”’တခြို့ယောကျကြား လေး တှေ..အမကိုအရမျးကွညျ့တာ..” ဟုတျလို့လားကှယျ..ဟငျး.ဟငျး.. ”ကတြျောကွုံရငျ..ကွုံသလိုလှတဲ့အကွောငျးတှေ..ပွော ဖွဈတယျ.ဒီညတော့.မသီတာလညျး.. တျောတျောနဲ့မအိပျဖူး..ညဝတျဂါဝနျနဲ့.. စကားတှထေိုငျပွောနတေယျ..အတှငျးက.. ဘာမှမ ဝတျထားဘူး..နို့တှမွေငျနရေတယျ.. ခဏနတေော့.. အိပျတော့မယျဆိုပွီး.အိမျရှတေံခါးကို. သှား ပိတျတော့.မသီတာရဲ့ နောကျပိုငျး အလှကိုကွညျ့ ပွီး..လီးကတောငျလာပွီး..”မငျးမငျး..စောစော အိပျနျော”ဆိုပွီး.အခနျးးထဲဝငျသှားတယျ… မနေ နိုငျတော့ပဲ..အိပျသာ ထဲဝငျ.. ထုလိုကျတော့တယျ…..တနထေ့ကျတနေ့.. မသီတာပျေါကတြျော..လိုးခငျြစိတျတှေ.. ပိုပိုဖွဈလာတယျ..ပစ်စညျးတှေကုနျး နှိုကျတဲ့အခြိနျ..အသားခငျြး..ထိသှား တဲ့အ ခြိနျတှဆေို..ကတြော့လီးက.တောငျနပွေီ… လကျသမားပဲလုပျရတာပေါ့….အရမျးပငျပနျး တဲ့ နဆေို့ မသီတာ..စောစောအိပျယာဝငျတယျ.. ဆိုငျသိမျးပွီး..မအိပျခငျ..အပေါ့သှားမယျဆိုပွီး.. အိမျသာအသှား
မသီတာအခနျးရှရေ့ောကျတော့..တံခါးလညျးမပိတျ..မီးလညျးမမှိတျတော့..အခနျးထဲထိနျထိနျသာနတေယျ..မသီတာ..အိပျနပေုံကို ကွညျ့လိုကျတော့..လကျတဖကျကိုနဖူးပျေါတငျ..လကျတဈဖကျက.ဘေးခထြားပွီး..ဒူးတဈ ဖကျကထောငျထားတယျ..ညအိပျ ဂါဝနျက. ထောငျထားတဲ့ဒူးကလှနျပွီး..ပေါငျရငျးအထိ.. လနျတကျနတေယျ..အရငျးတုတျခိုငျပွီးသှယျလတြဲ့ပေါငျရငျးဆီကွညျ့လိုကျ တော့..မီးရောငျ ကှယျနတေော့..ခပျရေးရေးလေးပဲမွငျရတယျ…အသကျကလညျးပုံမှနျရှူနတေော့..နို့အုံကွီးတှကေနိမျ့လိုကျမွှငျ့ လိုကျနဲ့..ကတြျောကွညျ့ရငျး..အာခေါငျတှခွေောကျလာတယျ..လကျတှေ လညျးတဆကျဆကျတုနျနပွေီး..ငပဲကိုကိုငျးပွီး ဂှငျးထု မယျလုပျတုနျး…”’ဟငျး..”ဆိုပွီး.. လကျကား..ပေါငျကား..လုပျလိုကျတော့. .ခုဏက..ရေးရေး လေးမွငျနရေတဲ့နရောက..
စောကျမှေးတှေ.. မညျးနကျနပွေီး.. မို့ဖောငျးနတေဲ့..မသီတာ.. စောကျဖုတျကွီးကို..ထငျထငျရှားရှားမွငျရပွီ…ကတြျောလညျး..မှနျး ပွီးထုလိုကျတာ..ခဏတှငျးပဲ..ပွီးသှားတော့တယျ..လရညျတှသေုတျ..အပေါ့သှားပွီး…အိပျယာဝငျတော့တာပေါ့…..မနကျ ရောကျ တော့မနိုးဘူး….”မငျးမငျးရေ…မငျးမငျး. .”မသီတာ..ကတြော့လာနိုးတာလေ..လီးက တောငျနတေော့..တံခါးဘကျလှညျ့.အိပျခငျြယောငျဆောငျနလေိုကျတယျ…”မငျးမငျးရေ.. မငျးမငျး..”..နိုးမရတော့..အခနျးထဲဝငျရငျဆိုပဲ….ကတြော့.လီး.က.၉၀ဒီဂရီ.. ထောငျမတျနတောကို.ထောငျမတျနတောကို. .ကွညျ့ပွီး..ပါးစပျကို.လကျနှဈဖကျနဲ့ပိတျကာ.. မှငျသကျစှာကွညျ့နတောကို..ကတြော့ မကျြလုံး ထောငျ့စှနျးမှမွငျနရေတယျ…. အပွငျပွနျထှကျသှား ပွီး..ပွနျချေါနိုးနတေယျ.. ကတြော့လညျး..”ဟုတျ..ဟုတျ..မသီတာ..” ဆိုပွီး..အိပျယာသိမျးထလာပါတော့တယျ.. မနကျစာ..အတူစားတော့..
မမသီတာ..မကျြနှာကပနျးရောငျသနျးနတေယျ..ကတြော့ကိုမကျြနှာခငျြးမဆိုငျဘူး..”မသီတာ..ဘာဖွဈလို့လညျး..” ဘာမှမဖွဈပါဘူး ကှယျ..နရေတာတဈမြိုးကွီး ဖွဈနလေို့..”မသီတာ..နားလေ..ကတြျောဈေး ရောငျးလိုကျမယျ..”..”ဒီနေ့..ဆိုငျပိတျလိုကျပါ မငျးမငျး ရယျ..အမလညျး..နားခငျြလို့.. မငျးမငျးလညျးနားရတာပေါ့.”..ဪ..ဟုတျကဲ့..ဟုတျကဲ့..””..ကတြျောဘာလုပျပေးရမလဲ..အမ”.. ရ တယျ..ရတယျ..”’..တဈခုခု..သောကျလိုကျပါလား..”မသီတာ..ယောကျကြားနဲ့..ဝေးနတေော့.. စိတျတှဂေယောကျဂယကျဖွဈနေ မှာ.ကတြော့လီးကိုလညျးမွငျထားတော့. အလိုးခံခငျြစိတျတှဖွေဈနမှောပေါ့.. ကတြျောလညျး..မသီတာကို..ဘယျလိုစရ မှနျးမသိ ဖွဈနတေယျ..အိမျသနျ့ရှငျး အတူလုပျနကွေတယျ.. ကုနျးကုနျးကှကှလုပျလေ..စိတျက.. ပိုလိုးခငျြလေ.ဖွဈနတေယျ.. ဘယျလိုမှ ထိမျးမရတော့ဖူး အိမျသာထဲဝငျ..ဂှငျးထုပလိုကျတယျ.. ပွီးပွီးခငျြ..မသီတာကတံခါးခေါကျ. .”မငျးမငျးရေ..ငါအိမျသာတကျခငျြလို့ မွနျမွနျ..”’.
“”ဟုတျ..”အမ..ဆိုပွီး… လရညျတှတေောငျ..မဆေးရသေးဘူး.. ထှကျလာ လိုကျတယျ..မသီတာလညျး.. ကိစ်စဝိစ်စပွီးလို့ထှကျလာ တော့…” “”မငျးမငျး..နငျအတကျကောငျးတှေ…. တကျနတေယျဟုတျလား..”.. “”ဟာ..အမကလညျး…ဘာလုပျလို့လဲ..”’ .”ငါမသိ ဘူး..မှတျနလေား..အိမျသာထဲမှာ. .နငျ့လီးရညျတှေ..မဆေးပဲထားခဲ့တယျ…”’ မလိမျခငျြတာနဲ့ပဲ… “”ဟုတျ..အမ..ဆောရီး..ကတြျော မနနေိုငျလို့.”’ “”မနနေိုငျရအောငျ..နငျကဘာစိတျဝငျစားနလေို့လဲ”’ “”အမ..အမ..” “”ဘာ..အမလဲ” “”အမ..ဖငျကွီးတှကွေညျ့ပွီး.. လိုးခငျြစိတျတှေ ဖွဈလာလို့ပါ”’. အဲလိုပွောလိုကျတော့..မသီတာမကျြနှာရဲသှားပွီး “”နငျတကယျလိုးခငျြနတောလား…လာလိုကျခဲ့”’ ကတြော့ကို.လကျဆှဲပွီး..အခနျးထဲ..ချေါသှားတယျ.. “”ဟဲ့.လာလေ..ငါ့ကိုလိုးခငျြတယျမဟုတျလား.. နငျကခိုးလညျးခိုးခငျြ တယျ..လကျကလညျးခြာတာ..”
ကတြော့အကြီ င်္ င်္..ပုဆိုးတှကေို..မသီတာကခြှတျပေးပွီး.. သူ့အဝတျအစားတှလေညျး ခြှတျလိုကျတယျ…မသီတာကိုကွညျ့ပွီး.. လီးကွီးက..ငေါ့ငေါ့ထောငျလာတယျ.. ကုတငျပျေါတကျ.ပေါငျကားပွီး စောကျဖုတျကွီးကိုဖွဲထားပေးတယျ.. ကတြျောမ အောငျ့နိုငျတော့ပဲ..လီးထိပျကွီးဖွငျ့.. မသီတာဖငျကွားကို..ဆောငျ့လိုး ထညျ့လိုကျတယျ.. “”အို့..ဘယျလိုလုပျနတောလဲ” လီးကို..မ သီတာလကျနဲ့လှမျးကိုငျတာ.. စောကျဖုတျဝမှာ.တပေ့ေးသညျ.. ကတြျောလညျးဆောငျ့လိုးထညျ့လိုကျသညျ.. “”ဗြိ..ဗြိ.ဇှိ ဇှိ..ဘှတျ..ဘှတျ..ပွှတျ..စှပျ..” “ဟ..အ..အား..ကြှတျ..ကြှတျ..ကြှတျ..ကြှတျ……..အောငျ့မလေး..အမေ့..အောငျ့မလေး..လေး….. အား..အား..အား…အီး..အီး..အှတျ.ဟငျး..ဟငျး”” ကတြျော ဆငျ့ကာဆငျ့ကာ ဆောငျ့လိုးပေးလိုကျတယျ.. စောကျရညျတှကေလညျး ထှကျတော့… ”ဗွှတျ..ဗွှတျ..ဘှတျ..ဘှတျ..အု..အု..အား..ဒုတျ..”’ အဆကျမပကျြဆောငျးလိုးနတော..မသီတာ..တယောကျ..ဘာလုပျ ဘာကိုငျရမှနျးမသိတော့ဘူး…ကတြော့ရဲ့တငျပါးတှကေို..
အတငျးဖတျပွီး..လကျသဲမြားနဲ့ကုတျဆှဲထားတယျ..အဲလို.. လကျသဲနဲ့ကုတျလိုကျတော့..မသီတာ.. စောကျဖုတျထဲက..ကတြော့လီး က.. သံခြောငျးပမာ..ပိုမာကြောသှားသညျ။ အားထညျ့ပွီးဆောငျ့တာ… “”ဘှတျ..ပွှတျ..အငျ့..အား…” “””ဘှတျ..ပွှတျ…အငျ့… အား.”’ “””ပွှတျဘှတျ…ပွှတျ…ဘှတျ..”’ မသီတာခဗြာ…ကတြော့…လိုးဆောငျ့ခကျြမြား ကွောငျ့..မကျြလုံးမြားမှေးစငျးပွီး.. နှုတျခမျးမြားကို..ကိုကျခဲကာ.. “”အငျ့..အငျ့..အား..အား..အမလေး…အိုး..အိုး.. ဟငျ့..မွမျမွနျနဲ့..ကွမျးကွမျး..ဆောငျ့လိုးပေးပါ.. အား..အား..အငျး..အငျး..ကြှတျ..ကြှတျ…. အ..အ..မငျးမငျးရယျ..ကောငျး့လှနျးလို့ပါ.. ဆောငျ့ပါ…..အား…ပွီးတော့မယျ.. .ပွီး တော.့.မယျ..ဆောငျ့ပါ…ဆောငျ့လိုးပါ.. အား..အား..ဆောငျ့..ဆောငျ့..အားးးးး”’ မသီတာပွီးခငျြနတော..ကတြျောသိသညျ.. တငျပါးမြားကို..ကော့ကော့ထိုးပွီး…. ကာမစိတျတကျကွှကာ.. အငမျးမရဖွဈနသေညျ……. “”အား..အား..အား..အီး….နာနာ ဆောငျ့..နာနာ ဆောငျ့..မညှာနဲ့….အား..အငျး..
ဟငျး..အိုး..အိုး. ဘှတျ..ဗဈြ….ဇှိ….ပွှတျ…အမလေး..ကောငျး လိုကျတာ…အိုး..အိုး..လိုး..လိုး….အီး..ထှကျပွီ……ထှကျပွီး…… အား…..အမလေး..လေး..”’ မသီတာ..ပါးစပျမှ..ရရှေတျ..မညျတမျးရငျး .ငွိမျကသြှားပါတော့တယျ….. နောကျပိုငျး..မသီတာနဲ့..တ ခနျးထဲအိပျပွီး.. ညတိုငျးလိုလို..လိုးဖွဈကွသညျ့။ပုံစံမြိုးစုံလို့တဲ့ အပွငျ..မသီတာ..စောကျဖုတျကို..စိတျပါလကျပါ..နမျးပေးသေး သညျ..ကတြော့ရဲ့.အပွုအစုမြား ကွောငျ့..မသီတာ..မခံရ..မနနေိုငျအောငျဖွဈလာသညျ..ဦးလေးပွနျရောကျတဲ့ညက..အရကျမူးလာ သညျ..ရောကျရောကျခွငျးပဲ..အခနျးထဲတနျးဝငျ ပွီး..မသီတာကို..လိုးပါသညျ..ဦးလေးကပွီးသှား တော့…ပငျပနျးလာလို့လားမ သိ..အိပျပြျောသှားတယျ….မသီတာ..အပွငျထှကျလာပွီး…. “မငျးမငျး..မငျးမငျး..” အသံလေးအုပျပွီးချေါတယျ..နငျ့..ဦးလေး က..ခဏလေးလိုးပွီး..အိပျနတေယျ အမ..စောကျပတျက..အရမျးယားနပွေီ.. လိုးရအောငျ”’ဆိုပွီး…ရခြေိုးခနျးထဲချေါသှား တယျ..ရခြေိုးခနျးရောကျတော့…ဂါဝနျကို..ခြှတျလိုကျ ပွီး..နံရံကို..လကျထောကျကာ..ကုနျးပေးသညျ…..ကတြောကျလညျး..တငျပါး နှဈဖတျကိုငျပွီး. .ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ..
“ဘှတျ..ဘှတျ..ဗွှတျ..ဗြိ..ဗြိ..” “”အား..အား..အငျး..အငျး..ဟငျး..ဟငျး..အိုး..” မသီတာကို..ဆောငျ့လညျးလိုး..နို့တှကေိုလညျး..ကိုငျ ကာ..တငျပါးတှလေညျး..ရိုကျပေးလိုကျသညျ..”’အငျး..အားး….အား..အိုး..ဟငျး..” “လိုး..လိုး..ကောငျးတယျ..အား..အား..အမ လေး..”’ဟီး..ဟီး..ဟငျး..အား..အား..မငျးမငျးရယျ့..” လိုးဆောငျ့နရေငျး..လီးကို..ခြှတျလိုကျသညျ.. “”အို..ဘာလို့ခြှတျလိုကျတာ လဲ..” “”အမကို..ပိုကောငျးအောငျ့လိုးပေးမလို့..” ဘိုထိုငျအိမျသာပျေါ..ကတြျောထိုငျပွီး..အပျေါကနဆေောငျးခိုငျးသညျ..နောကျက လညျးနို့တှကေို. ..ညှဈပေးလိုကျသေးတယျ..ဂုတျသားလေးတှကေို..လြာနဲ့ယကျပေးလိုကျတော့..မဆောငျ့တော့.ပဲ..ပှတျလိုးလိုးနေ တယျ.. “”အား..အား..အငျး..ဟငျး..ဟငျး..” “”ကြှတျ..ကြှတျ..အို..အို…အ..မငျးမငျးရယျ..” “ကောငျးလိုကျ တာ..အငျး..အငျး..ဟငျး..ဟငျး” “”အမ..ကောငျးလား.ကတြျောလိုးပေးတာ..” “”အရမျးကောငျးတာပေါ့မငျးမငျးရယျ..အား..အား” “အမ ထလိုကျ..ဘိုထိုငျမှာ..လကျထောကျလိုကျ” မသီတာ..တငျပါးကွီး..ကော့ထားတော့..မလိုး သေးပဲ..တငျပါးကို၂ခကျြ၃ခကျြ ရိုကျပွီး..
လကျကို မှောကျခုံထားကာ..မသီတာ..စောကျဖုတျကွီးကို..နှိုကျသညျ..မသီတာ..ကော့တကျသှားသညျ….လကျကို..အသှငျးအ ထုတျလုပျပေးရငျ..စအိုလေးကို..လြှာနဲ့ယကျပေးလိုကျရာ…မသီတာ.ထှနျ့ထှနျ့ကိုလူးနသေညျ…. “အ..အို..အိုး..ဟငျး..ဟငျး..အငျး..” “အမလေး..မငျးမငျးရယျ..ဟငျး..ဟငျး” “ဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲကှာ..အိုး..အိုး.. အမ..မရ တော့ဘူး..အား..အား..လိုးပေးပါတော့..” မတျတကျရပျပွီး..မသီတာ.တငျပါးကွီးကို.. လီးနဲ့.၃..၄ခကျြရိုကျပေးလိုကျတော့..ရမ်မကျခိုး ငှတှေ့အေပွညျ့နဲ့ကတြော့ကိုကွညျ့လာတယျ.. နှုတျခမျးလေးကိုနမျးစုပျပေးပွီး.. “လိုးပေးတော့မယျနျော” မသီတာ..ခေါငျးလေး ညိတျပွီး..လကျထောကျပွီး ကုနျးပေးတယျ..တငျပါးထိပျကကိုငျကာဆောငျ့လိုးထညျ့လိုကျသညျ.. “အား..အား..အား..အမ လေး..အား..ဟငျ့..ဟငျ့….အငျး..ကြှတျ..ကြှတျ..ကောငျးတယျ..ကောငျး.. တယျ..အား..အား. .ဘှတျ..ဘှတျ..စှပျ..ဖတျ..ဖတျ..ဗွှ တျ..အ..အ..အိုး..လို.း.လိုး..ဆောငျ့..ဆောငျ့…အားပါးပါး..ဘှတျ..အား..အိ..ထိတယျ..ထိတယျ..
အမလေး..အမလေး..အာ.း..မငျးမငျး..မငျးမငျး.. ဆောငျ့..ပွီးပွီ..ပွီးပွီ..အ..အ..အ” မသီတာပွီးသှားသလို..ကတြျောလညျး..မ သီတာ..စောကျခေါငျးထဲ..သုတျရညျမြား.. ပနျးထညျ့လိုကျပါတော့သညျ…. ဦးလေး..အလုပျရှာပေးတာ..အိမျကားမောငျးအလုပျရ သညျ..နဘေ့ကျမောငျးပွီး..ညဘကျဦးလေးအိမျမှာပွနျအိပျတယျ..၃..၄လကွာတော့…မသီတာမှာ..ကိုယျဝနျရှိလာတယျ..ဘယျသူ့ ကိုယျ ဝနျလညျး..အတိအကမြသိပမေယျ.့.ကတြျောတို့တူရီးနှဈယောကျရဲ့..ကိုယျဝနျတော့သခြောပါ တယျ…ဦးလေးကလညျး မကွာခဏ..ခရီး ထှကျသလို..အလုပျရှငျသဌေးကလညျး..နိုငျငံခွားမကွာခဏသှားတယျ…ဘော့ဈခရီးမထှကျခငျညဆို..ဦးလေး အိမျမပွနျရပဲ..ဘော့ဈအိမျမှာသာ .အိပျရသညျ..ကတြော့..ဘောဈ့က..နိုငျငံခွားနဲ့ ဖကျဆကျအလုပျ..လုပျတယျနဲ့တူ တယျ..အစညျးအဝေးလညျးတကျရတယျ..ဘော့ဈမိနျးမနာမညျ
“နှယျနှယျဝငျး”တဲ့..မမဝငျးလို့ပဲ..ချေါကွတယျ… ကိုယျဝနျ၅လကြျောရှိတယျ…ဗိုကျက.. အနညျးငယျ..ပူနပွေီ….ကိုယျဝနျသညျအ ကြီ င်ျတှေ ဝတျရငျ..ဖွူဖှေးနတောပဲ..သူဌေးဆိုပမေယျ့.. တနျးတူဆကျဆံတယျ..ခုလညျးဘော့ဈခရီး ထှကျတော.့အိမျမှာနပေေးဖို့မှာ တာနဲ့….ဦးလေးအိမျမပွနျရတော့ဘူး…အိမျကိစ်စကူလုပျ..မမဝငျးအပွငျထှကျခငျြလိုကျပို့နဲ့..အခြိနျတှကေုနျခဲ့တယျ..မမဝငျးနဲ့လညျး အရမျးကိုရငျးနှီးနပွေီ…ပွောမနာဆိုမနာတှဖွေဈနပွေီ..တနတေ့ော့..မမဝငျးကငို နတေယျ..ဘာလို့လဲမေးလိုကျတော့..ဘာမှမ ပွော ဘူး… “”မမဝငျးရယျ..မငိုပါနဲ့ဗြာ…” မကျြရညျတှသေုတျပေးနတေယျ….အသားလေးကလညျးတျောတျောနူးညံ့တယျဗြ..ဟိုပှတျဒီ ပှတျ လုပျပေးရငျး.မမဝငျးက..ဘာမပွောညာမပွောနဲ့….ကတြော့နှုတျခမျးကိုစုပျလိုကျတယျ..ကတြျော လညျး..လြှာနဲ့ပွနျကလိ ပေးလိုကျတယျ….နို့တှကေလညျးကိုယျဝနျရှိလို့လားမသိ..တျောတျောကွီးတယျ..အကြီ င်ျပျေါကရှရှလေးပှတျပေးနတေယျ… “”မငျး မငျး..မမဝငျးကို..အထငျသေးသှားပွီလား..”
“အထငျမသေးပါဘူး..မမဝငျးရယျ..ပုထုဇဉျပဲ.. အမှနျတိုငျးပွောရရငျ..မမဝငျးကို..လိုးခငျြနတော ကွာပွီ…” “ဘာလို့လဲ.” “”မမဝငျး အသားအရညျတှရေယျ..ဖူးယောငျနတေဲ့…….နှုတျ့ခမျးလေးတှရေယျ….မမဝငျးရခြေိုးရငျတှရေ့တဲ့..ဖငျသားကောကျကောကျကွီး တှကေို…စိတျနဲ့မှနျးပွီး..လိုးခငျြနတောပါ” ပွောရငျး..မမဝငျးဂါဝနျကိုခြှတျလိုကျတော့.. ဗိုကျကပူပူလေး..ဆိုဖာပျေါမှာပဲထိုငျခိုငျ ပွီး…အသာလေးလှဲလိုကျပါတယျ…ပေါငျလေးကိုကား လိုကျပွီး..ပွဲအာနသေော..စောကျဖုတျလှလှလေးကို..လြှာနဲ့..ယကျလိုကျပါ တယျ…. “”အို..မငျးမငျး..မလုပျနဲ့လေ…ဖုနျးနိမျ့မှာပေါ့..” ပေါငျကိုအတငျးစိထားပါတယျ…ပေါငျးသားလေးတှယေကျ…ပွူးထှကျနေ တဲ့အဖုတျကို..ယကျ နတေော့..စိထားတဲ့ပေါငျက..တဖွညျးဖွညျးကားလာပါတယျ…ပေါငျဂှစုံကိုယကျ…စအိုနဲ့စောကျ ဖုတျတောကျလြောကျယကျပေးလိုကျတော့..
မမဝငျး..တငျပါးကွီးတှကေော့တကျလာတယျ…အဲခါကမြှ..စောကျဖုတျကို..အလြားလိုကျ.. ယကျပေးလိုကျ…စောကျစေ့ ကို.လြှာထိပျနဲ့ထိုး… တခါတခါ..စုပျလိုကျနဲ့..လုပျနတော… “အိုး..အိုး..အား..အား..အမလေး…ဟငျး..ဟငျး.. မငျးမငျး…အား..အား… ကြှတျ..ကြှတျ..ဟငျး..အို” မမဝငျး..အရမျးကောငျးနပွေီ…ကတြျောလညျး..လကျသူကွှယျ…လကျခလယျကို.. ပကျလကျထား ပွီး..မမဝငျးစောကျဖုတျထဲထညျ့လိုကျပါတယျ..လကျနှဈခြောငျးက..အတှငျးသား မြားကို..လိုကျစမျးနသေလို..ဟိုဖိ..ဒီဖိလုပျပေးနေ ပါတယျ….စောကျစကေို့လညျး..စုပျလိုကျ. ယကျလိုကျနဲ့..ဘယျလကျကလညျး..မမဝငျးရဲ့..နို့သီးလေးကို..လှမျးကိုငျထားသေးတယျ.. မမဝငျးခဗြာ.. “ဟငျး..ဟငျး..အငျး..အငျး..အား.. ကြှတျ..ကြှတျ.. “အမလေး..အား..အား.. ဟငျး..မငျးမငျး..ဟငျ့. ..မရတော့ ဖူး..အား..အား.. ထှကျကုနျပွီ..ထှကျ.. ထှကျ…အား..အ..အ…” မမဝငျး..တဆကျဆကျတုနျခါပွီး.. စောကျရညျမြားကို..ကတြော့ မကျြနှာပျေါ.. ပနျးထုတျလိုကျပါသညျ.. ဆကျလကျထှကျနတေဲ့.. စောကျရညျလကျကနျြမြားကိုလညျး… လြှာနဲ့သိမျးယကျပေးလိုကျ ပါသညျ
ကတြော့လုပျရကျကို ကွညျ့ပွီး..မမဝငျးက..အားတုံ့အားနာနဲ့.. “မငျးမငျးရယျ..အားနားလိုကျတာ… မမဘဝမှာ.. ဒါပထမဆုံး..အနမျး ခံဖူးတာပဲ… ရငျထဲမှာ..ပွောပွမတကျအောငျ.. အရမျးကောငျးလှနျးတယျကှယျ.” ထိုသို့ပွောရငျး..ကတြော့လီးကို.. ဂှငျးထုပေးနေ တယျ… “မငျးမငျး..မမကိုလိုးခငျြနပွေီလား…” “မလုပျပါနဲ့..မမဝငျးရယျ..ဗိုကျထဲကလေးကို ထိသှားပါ့မယျ…” “”အို..ဘာဆိုငျလို့ လဲ..မငျးမငျးရယျ.. ထိတယျဆိုတာ..အရမျးကွမျးမှပါ.. ညငျညငျသာသာလိုးရငျရတယျ..” “”မမဝငျးက ရငျသှေးလှယျထားတော့.. အလိုးခံခငျြစိတျရှိလို့လား” “ဘယျလိုပွောလိုကျတာလဲမငျးမငျးရယျ… မမ.ယောကျကြားတောငျ.. မဖွဈမနမေို့ လှတျလိုကျတာ..မ မှေးမခငျြး.. ဘယျမှသှားစခေငျြတာမဟုတျဘူး… အဲဒီအမှေးခငျအခြိနျထိ.. အရမျးကို..အလိုးခံခငျြတာ.. မိနျးမတိုငျးနီးပါးပဲ”’ “”ဪ..ဟုတျလား..မမဝငျး..ကတြျောက.. ကိုယျဝနျရှိ ရငျလိုးမရဘူးထငျနတောဗြ..” “”လိုးမရဘူးဆိုတာ..ကလေးမှေး ပွီး..၁လခှဲ..၂လလောကျကိုပွောတာ…သှေးနုသားနုတဲ့ အခြိနျပေါ့.အခြို့လညျးလိုးတယျ.. မိနျးကလေးကိုထိတာပေါ့…”
“”မငျးမငျးလီးက.မကဖြူးနျော… အရမျးလိုးခငျြနလေား..လိုးတော့လေ..” ပွီးတော့..မမဝငျးက..ကတြော့အတှကျ.. ပုဇှနျထုပျ ပုံစံ..ကှေးကှေးလေး..နပေေးထားတယျ..တငျပါးလေးအသာတှနျးပွီး.. လီးကိုတဈဝကျ ထညျ့ပွီး..ဖွညျးဖွညျးပဲ..လိုးပေးနတေယျ.. ခဏနတေော့..စောကျရညျတှေ လိုကျလာပွီး.. “မငျးမငျးအဆုံးထိလိုး..ရတယျ.မညှာနဲ့..လိုး” ခါးအားပွုပွီး..ကပျညှောငျ့ပွီး လိုးပေး နတေယျ.. “ဘှတျ..ဘှတျ..ပွှပျ..ပွှတျ..” “အား..အား..ဟငျး.ဟငျး ကောငျးတယျ..လိုးပေး.. ဟငျး..ဟငျး..အို..အိုး မငျး မငျး..အား..အာ.း…ကြှတျ..ကြှတျ.. .မမစောကျဖုတျထဲ..လီးရညျထညျ့ နျော..အား..အား….လိုး..လိုး..မမပွီးတော့မယျ…အား…. ကောငျးတယျ….အား….မငျးမငျးရယျ.. လိုးတကျလိုကျတာ… ဟငျး..ဟငျး…ကြှတျ..ကြှတျ ကောငျး တယျ..ဆောငျ့..ဆောငျ့..အား…..အား….”မမဝငျးက..အျောလေ.. စောကျပတျကွီးက..ကဉျြးသှားလားမသိဘူး..လီးကို..ညှဈညှဈ ထားတယျ..အခကျြ၂၀လောကျ..ဆကျတိုကျဆောငျ့ပွီး… မမဝငျး..စောကျဖုတျထဲသုတျရညျ. .ပနျးထညျ့ပေးလိုကျပါသညျ။ ဘော့ဈမ လာခငျအခြိနျထိ..မမဝငျးရဲ့.. စိတျလိုအပျခကျြတှကေို..နညေ့မပကျြ.. ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့ပါသညျ။ဘော့ဈပွနျလာ တော့..ကတြော့ အတှကျ..လကျဆောငျမြားယူဆောငျခဲ့ပါ သေးသညျ။
ကြေးဇူးတငျစကား.. ပွောဆိုပွီး နောကျဖေး၌အအေးဖြျောနသေော.. မမဝငျးဆီသှား၍..အာဘှားပေး. နှုတျဆကျကာ. .ဦးလေး အိမျ..ပွနျလာခဲ့ပါသညျ။ အိမျရောကျတော့..ဦးလေးနဲ့တနျးတိုးတာပဲ.. “မငျးပွနျလာတာနဲ့အတျောပဲ..ငါနကျဖွနျခရီးထှကျရ မှာ..မငျးအမက.. ကိုယျဝနျနဲ့ဆိုတော့ညရေးညတာ..စိတျမခဘြူး…. လိုအပျတာ.လုပျပေးလိုကျပါကှာ…” “စိတျခပြါ..ဦးလေးရာ.. ကြ တျောဂရုစိုကျပါ့မယျ.. စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့သှား…”’..စိတျထဲကတောငျ နာမညျပေးလိုကျသေးတယျ.. ”’ဪ..ငါ့ဘဝက ဗိုကျ စောငျ့(ဆောငျ့)မငျးမငျးဖွဈနေ ပါရောလား””’.. “မမသီတာရယျ..သတိရလိုကျတာ..” “တူတူပါပဲ..မငျးမငျးရယျ..” မသီတာနောကျ က ခှထိုငျပွီး..ဗိုကျကိုပှတျပေးနတေယျ… ဘျောလီဝတျမထားတော့..နို့တှပေါကိုငျပေး. .ပါးဖောငျးဖောငျးလေးကိုလညျး..နမျး ဂုတျ သားကို..လြှာနဲ့ယကျလိုကျတော့.. မသီတာမနတေကျတော့ဘူး.. “အို..မငျးမငျး..ယားတယျကှယျ.. အိုး..အိုး..ကွညျ့ပါလား..ဟငျး… ဟငျး..ကြှတျ..ကြှတျ…” မသီတာ..စောကျဖုတျကို..ကိုငျတော့… စောကျရညျတှေ..ရှဲနပွေီ…. “”အမ..စောကျရညျတှေ..ထှကျနပွေီ.”.
“”မထှကျပဲနမေလား…ကလိနတောကိုး.. အခနျးထဲသှားရအောငျ..နျော..” အခနျးထဲရောကျတော့.. မသီတာကိုအရငျခြှတျ ပေးလိုကျ တယျ..ကတြျောက.. အတှငျးခံမှလှဲ၍ ကနျြတာ..ဘာမှ..ရှိတော့ဘူး..ကုတငျပျေါ.. ပကျလကျလှနျခိုငျးလိုကျတယျ… စောကျဖုတျလကျ နဲ့ကလိပေး. ကနျြလကျရဲ့လကျမက. .စောကျစကေို့..ဖိဖိပွီးပှတျပေးနတေယျ.. စောကျပကျနှုတျခမျးတှကေို.. လြှာနဲ့ယကျပေး လိုကျ..စောကျစကေို့..စုပျလိုကျ.. သှားနဲ့ကိုကျ လိုကျလုပျပေးနတေော့.. “ဟား..ဟငျး..အား..အား..အို..အို..” “ကြှတျ..ကြှတျ..ဟငျး..ဟငျး..အ” “မမသီတာ..ကတြော့လီးကို.. နမျးပေးပါလား..” ကုတငျပျေါတကျ..မကျတကျရပျ.. မသီတာရှေ့ မှာရပျနလေိုကျတယျ.. မသီတာက..အတှငျးခံပျေါကနေ.. ကတြော့လီးကို.. ပြော့ပွောငျးတဲ့လကျခြောငျးလေးတှေ.. ပှတျသပျပေးနေ တော့.. ပွီးတော့..လကျမနှဈခြောငျးနဲ့အတှငျးခံကို.. ခြှတျလိုကျတော့.မွှပေုစဉျး ထောငျလာသလို.. ငေါကျကထဲ..ထှကျလာ တယျ..လီးကိုဘယျ လကျနဲ့ကိုငျပွီး..လဥကို..လြှာနဲ့ယကျပေးနေ တယျ..ယကျလို့ …ဝသှားတော့..လီးနဲ့.. သူ့ပါးစပျကိုရိုကျလိုကျသေး တယျ.. ဒဈကို..အသာငုံလိုကျ.. လြှာနဲ့ယကျလိုကျ ဆီးပေါကျကို..လြှာထိပျနဲ့ထိုးလိုကျ… လီးဒဈကိုငုံထားရာကနေ..လီးတခြောငျးလုံး. စုပျလိုကျတော့
“အို..အမ..အား..အား..” “ကောငျးတယျ..အမရယျ..”.. ..ပွောကာမှာ..အဆကျမပွကျကိုစုပျနေ တော့တယျ.. ကတြျောလညျး ကောငျးလာတော့.. ဆံပငျတှကေိုငျ..လီးကို..မသီတာပါးစပျထဲ.. ကော့ကော့ထိုးပေးနတေယျ..အာခေါငျတှေ.. ထိုးမိ တော့.”ဒုတျ..ဒုတျ..”နဲ့….သုတျ.. မနဲကိုထိမျးထားရတယျ.. “မသီတာ..ကတြော့ကို..အပျေါကလိုးပေး” “ဖွဈပါ့မလား..မငျးမငျး ရယျ…” “သိပျ့ဖွဈတာပေါ့..” ပကျလကျလှနျပေးလိုကျတော့.. အပျေါကတကျခှ..လီးကိုကိုငျ.. သူ့စောကျဖုတျဝတပွေီ့း.. ထိုငျခလြိုကျ တယျ.. “ဇှိ..ဇှိ..ဘှတျ..ဘှတျ..ပွှတျဗွှတျ” “အိ..အား..အား..အမလေး..” ဗိုကျထောကျနတေော့.. လကျထောကျလို့မရဘူး ဖွဈနေ တယျ..ခွထေောကျအားကို.. အသုံးပွုဆောငျ့ပေးနတေယျ.. “ဘှတျ..ဘှတျ..ဗွှတျ..စှတျ..အား..အား ဟငျး..ဟငျး..အမလေး… လေး..အား..အီး” ဆောငျတာခဏရပျပွီး…ဟာ..အငျး..မောလိုကျတာ..မငျးမငျးရယျ မငျးမငျး.တလှညျ့လိုးပေးဦ.း”
မသီတာကို..ပကျလကျလှနျခိုငျးပွီး.. ကတြျောကုတငျအောကျ..ဆငျးလိုကျတယျ.. ပေါငျနှဈဖကျအသာဖွဲ….မသီတာ.. စောကျဖုတျ ကို..ကုနျးယကျ လိုကျသေးတယျ…ပွီးတော့.. စောကျခေါငျးဝလီး တဆေ့ောငျ့လိုကျတယျ..”ဘှတျ..ဗွှတျ. .ဗြိ..ဒုကျ” “အား..အမ လေး..ကွမျးလိုကျတာ မငျးမငျးရယျ” “အငျး..အငျး..အား..အား..အိုး..အငျး..ဟငျး ကြှတျ..ကြှတျ..အား..အား..ကောငျးတယျ… အ..အား…ဆောငျ့..ဆောငျ့..အမလေး.. လိုး..လိုး” လီးခဏခြှတျပွီး..မသီတာကို.. တစောငျးအနအေထား..ပွုပွငျလိုကျတယျ.. ပွီး တာနဲ့..လီးတေ့.. ဆောငျ့လိုးထညျ့လိုကျတယျ.. “အား..အား..အားရလိုကျတာ…အငျး..အငျး..လိုး…လို့..အမလေး…အ ဟငျ့….အီး..အငျး….လိုး.
လိုးအား..ဆောငျ့.. ဆောငျ့..နာနာဆောငျ့..အားမနာနဲ့ ကောငျးလာပွီး..အငျး..အား.. အို..အမေ့…ဟငျး…..မငျးမငျးရယျ.. အရမျးလိုးတကျတယျ..စောကျခေါငျးထဲံလဲ..နံရံတှေ..အရမျးထိတယျ.. ကောငျးတယျ…ဟား..ဟား.. အငျး..အငျ့း..အီး..အို… ပွီးတော့မယျ..ပွီးတော့မယျ. မငျးမငျး..မရပျနဲ့.. မရပျနဲ့..ဆောငျ့..ဆောငျ့..အား..အား..အား ထှကျပွီ..ထှကျကုနျပွီ…အား.အား..အ” မသီတာပွီးသှားသလို..ကတြျောလညျး.. လီးအဆုံးထိုး့ထညျ့..သုတျရညျမြား.. ပနျးထညျ့ကာပွီးလိုကျပါတော့သညျ။ ……ပွီးပါပွီ
ကျတော်ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့… အလုပ်လုပ်ရန်..ရန်ကုန်မြို့သို့.. တက်လာပါသည်။ဦးလေးအိမ်ရောက်တော့.. ဦးလေးမိန်းမ..မ သီတာနဲ့ပဲတွေ့တယ်.. သူ့ယောက်ကျား…အညာဘက်မှာ.. အာလူး ၊ကြက်သွန်သွားတင်တယ်။ ဦးလေးပြန်လာမှ..အလုပ်ရှာပြော တယ်။ ခဏနေတော့..ဦးလေးဆီဖုန်းဆက်တယ်.. ကျတော်ရောက်နေတဲ့အကြောင်း… ဘာတွေပြောလဲတော့..မသိဘူး။ပြီးမှ..” မင်း မင်း ရေ..နင့်ဦးလေးက..အိမ်မှာပဲနေ.. ဘယ်မှမသွာနဲ့တဲ့..ငါ့နဲ့လောလောဆယ်.. ဈေးဝိုင်းရောင်းတဲ့..သူ ပြန်လာရင်..အလုပ်ရှာပေး မယ်တဲ့”.. ”ဟုတ်..မမသီတာ..”ကျတော်က.. တောကတက်လာတဲ့သူဆိုတော့.. ရန်ကုန်အိမ်လေးက..ကျတော့အတွက် ကျဉ်းနေ သလိုပဲ…ဘယ်တက်နိုင်မလဲ.. ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ချင်တာကို… ရပ်ကွက် ဆိုင်ဆိုတော့.. ဝယ်သူတော့များသား… တနေ့တ နေ့..ဈေးရောင်းလိုက်.. အိမ်အလုပ်ကူလုပ်လိုက်နဲ့..အချိန်တွေ ကုန်နေတယ်
ဦးလေးနဲ့မသီတာ.. အိမ်ထောင်ကြတာ..၃..နှစ်လောက်ရှိပြီ.. ကလေးမရသေးဘူး. မသီတာက..မွန်.စပ်တဲ့သဘောရှိတယ်.. အသား လည်းဖြူတယ်..လက်ပြတ်.. ခါးတိုဝတ်တော့.. လက်မောင်းသားတွေက..ပြည့်တင်း ဝင်းဝါတယ်..ခါးကသိမ်ပြီး..တင်သားများက.. ထင်ရှားစွာ..ပေါ်လွင်နေတယ်..ဖင်ကြီးတွေ.. ကော့ပြီး..တုန်ခါနေတယ်..ကျတော်လည်း.. လူပျိုဝင်ကာစဆို တော့..ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို.. စိတ်ဝင်စားစွာ. .ကြည့် တက်နေပြီ…ဈေးရောင်းပြီး မှချက်ပြုတ်စား သောက်ကြသလို.. တခါတရံ တော့.. ချက်ရင်းဈေးရောင်းတယ်..ရုံးပိတ်ရက်ဆို.. ပို ရောင်းရသလို.. ဆိုင်လည်းစောစောပိတ်တယ်.. အဲလိုနေမျိုးဆိုရင်..မ သီတာ..နဲ့..ထမင်းအတူစား ဖြစ်ကြတယ်..”အမ..ကလေးမယူဘူးလား.. ”ခု တော့..ယူထားတယ်.. ရ..မရတော့.မစစ်ရသေးဘူး..”
အိမ်ထောင်သည်မှန်း မသိသာဖူးနော်..အမက..အပျိုတိုင်းပဲ. .”မ ဟုတ်တာမင်းမင်းရယ်..” တကယ်ပြောတာ..”’တချို့ယောက်ကျား လေး တွေ..အမကိုအရမ်းကြည့်တာ..” ဟုတ်လို့လားကွယ်..ဟင်း.ဟင်း.. ”ကျတော်ကြုံရင်..ကြုံသလိုလှတဲ့အကြောင်းတွေ..ပြော ဖြစ်တယ်.ဒီညတော့.မသီတာလည်း.. တော်တော်နဲ့မအိပ်ဖူး..ညဝတ်ဂါဝန်နဲ့.. စကားတွေထိုင်ပြောနေတယ်..အတွင်းက.. ဘာမှမ ဝတ်ထားဘူး..နို့တွေမြင်နေရတယ်.. ခဏနေတော့.. အိပ်တော့မယ်ဆိုပြီး.အိမ်ရှေတံခါးကို. သွား ပိတ်တော့.မသီတာရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှကိုကြည့် ပြီး..လီးကတောင်လာပြီး..”မင်းမင်း..စောစော အိပ်နော်”ဆိုပြီး.အခန်းးထဲဝင်သွားတယ်… မနေ နိုင်တော့ပဲ..အိပ်သာ ထဲဝင်.. ထုလိုက်တော့တယ်…..တနေ့ထက်တနေ့.. မသီတာပေါ်ကျတော်..လိုးချင်စိတ်တွေ.. ပိုပိုဖြစ်လာတယ်..ပစ္စည်းတွေကုန်း နှိုက်တဲ့အချိန်..အသားချင်း..ထိသွား တဲ့အ ချိန်တွေဆို..ကျတော့လီးက.တောင်နေပြီ… လက်သမားပဲလုပ်ရတာပေါ့….အရမ်းပင်ပန်း တဲ့ နေ့ဆို မသီတာ..စောစောအိပ်ယာဝင်တယ်.. ဆိုင်သိမ်းပြီး..မအိပ်ခင်..အပေါ့သွားမယ်ဆိုပြီး.. အိမ်သာအသွား
မသီတာအခန်းရှေ့ရောက်တော့..တံခါးလည်းမပိတ်..မီးလည်းမမှိတ်တော့..အခန်းထဲထိန်ထိန်သာနေတယ်..မသီတာ..အိပ်နေပုံကို ကြည့်လိုက်တော့..လက်တဖက်ကိုနဖူးပေါ်တင်..လက်တစ်ဖက်က.ဘေးချထားပြီး..ဒူးတစ် ဖက်ကထောင်ထားတယ်..ညအိပ် ဂါဝန်က. ထောင်ထားတဲ့ဒူးကလွန်ပြီး..ပေါင်ရင်းအထိ.. လန်တက်နေတယ်..အရင်းတုတ်ခိုင်ပြီးသွယ်လျတဲ့ပေါင်ရင်းဆီကြည့်လိုက် တော့..မီးရောင် ကွယ်နေတော့..ခပ်ရေးရေးလေးပဲမြင်ရတယ်…အသက်ကလည်းပုံမှန်ရှူနေတော့..နို့အုံကြီးတွေကနိမ့်လိုက်မြှင့် လိုက်နဲ့..ကျတော်ကြည့်ရင်း..အာခေါင်တွေခြောက်လာတယ်..လက်တွေ လည်းတဆက်ဆက်တုန်နေပြီး..ငပဲကိုကိုင်းပြီး ဂွင်းထု မယ်လုပ်တုန်း…”’ဟင်း..”ဆိုပြီး.. လက်ကား..ပေါင်ကား..လုပ်လိုက်တော့. .ခုဏက..ရေးရေး လေးမြင်နေရတဲ့နေရာက..
စောက်မွေးတွေ.. မည်းနက်နေပြီး.. မို့ဖောင်းနေတဲ့..မသီတာ.. စောက်ဖုတ်ကြီးကို..ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပြီ…ကျတော်လည်း..မှန်း ပြီးထုလိုက်တာ..ခဏတွင်းပဲ..ပြီးသွားတော့တယ်..လရည်တွေသုတ်..အပေါ့သွားပြီး…အိပ်ယာဝင်တော့တာပေါ့…..မနက် ရောက် တော့မနိုးဘူး….”မင်းမင်းရေ…မင်းမင်း. .”မသီတာ..ကျတော့လာနိုးတာလေ..လီးက တောင်နေတော့..တံခါးဘက်လှည့်.အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်…”မင်းမင်းရေ.. မင်းမင်း..”..နိုးမရတော့..အခန်းထဲဝင်ရင်ဆိုပဲ….ကျတော့.လီး.က.၉၀ဒီဂရီ.. ထောင်မတ်နေတာကို.ထောင်မတ်နေတာကို. .ကြည့်ပြီး..ပါးစပ်ကို.လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကာ.. မှင်သက်စွာကြည့်နေတာကို..ကျတော့ မျက်လုံး ထောင့်စွန်းမှမြင်နေရတယ်…. အပြင်ပြန်ထွက်သွား ပြီး..ပြန်ခေါ်နိုးနေတယ်.. ကျတော့လည်း..”ဟုတ်..ဟုတ်..မသီတာ..” ဆိုပြီး..အိပ်ယာသိမ်းထလာပါတော့တယ်.. မနက်စာ..အတူစားတော့..
မမသီတာ..မျက်နှာကပန်းရောင်သန်းနေတယ်..ကျတော့ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူး..”မသီတာ..ဘာဖြစ်လို့လည်း..” ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကွယ်..နေရတာတစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေလို့..”မသီတာ..နားလေ..ကျတော်ဈေး ရောင်းလိုက်မယ်..”..”ဒီနေ့..ဆိုင်ပိတ်လိုက်ပါ မင်းမင်း ရယ်..အမလည်း..နားချင်လို့.. မင်းမင်းလည်းနားရတာပေါ့.”..ဪ..ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့..””..ကျတော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ..အမ”.. ရ တယ်..ရတယ်..”’..တစ်ခုခု..သောက်လိုက်ပါလား..”မသီတာ..ယောက်ကျားနဲ့..ဝေးနေတော့.. စိတ်တွေဂယောက်ဂယက်ဖြစ်နေ မှာ.ကျတော့လီးကိုလည်းမြင်ထားတော့. အလိုးခံချင်စိတ်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့.. ကျတော်လည်း..မသီတာကို..ဘယ်လိုစရ မှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်..အိမ်သန့်ရှင်း အတူလုပ်နေကြတယ်.. ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်လေ..စိတ်က.. ပိုလိုးချင်လေ.ဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်လိုမှ ထိမ်းမရတော့ဖူး အိမ်သာထဲဝင်..ဂွင်းထုပလိုက်တယ်.. ပြီးပြီးချင်..မသီတာကတံခါးခေါက်. .”မင်းမင်းရေ..ငါအိမ်သာတက်ချင်လို့ မြန်မြန်..”’.
“”ဟုတ်..”အမ..ဆိုပြီး… လရည်တွေတောင်..မဆေးရသေးဘူး.. ထွက်လာ လိုက်တယ်..မသီတာလည်း.. ကိစ္စဝိစ္စပြီးလို့ထွက်လာ တော့…” “”မင်းမင်း..နင်အတက်ကောင်းတွေ…. တက်နေတယ်ဟုတ်လား..”.. “”ဟာ..အမကလည်း…ဘာလုပ်လို့လဲ..”’ .”ငါမသိ ဘူး..မှတ်နေလား..အိမ်သာထဲမှာ. .နင့်လီးရည်တွေ..မဆေးပဲထားခဲ့တယ်…”’ မလိမ်ချင်တာနဲ့ပဲ… “”ဟုတ်..အမ..ဆောရီး..ကျတော် မနေနိုင်လို့.”’ “”မနေနိုင်ရအောင်..နင်ကဘာစိတ်ဝင်စားနေလို့လဲ”’ “”အမ..အမ..” “”ဘာ..အမလဲ” “”အမ..ဖင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး.. လိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာလို့ပါ”’. အဲလိုပြောလိုက်တော့..မသီတာမျက်နှာရဲသွားပြီး “”နင်တကယ်လိုးချင်နေတာလား…လာလိုက်ခဲ့”’ ကျတော့ကို.လက်ဆွဲပြီး..အခန်းထဲ..ခေါ်သွားတယ်.. “”ဟဲ့.လာလေ..ငါ့ကိုလိုးချင်တယ်မဟုတ်လား.. နင်ကခိုးလည်းခိုးချင် တယ်..လက်ကလည်းချာတာ..”
ကျတော့အကျီ င်္ င်္..ပုဆိုးတွေကို..မသီတာကချွတ်ပေးပြီး.. သူ့အဝတ်အစားတွေလည်း ချွတ်လိုက်တယ်…မသီတာကိုကြည့်ပြီး.. လီးကြီးက..ငေါ့ငေါ့ထောင်လာတယ်.. ကုတင်ပေါ်တက်.ပေါင်ကားပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကိုဖြဲထားပေးတယ်.. ကျတော်မ အောင့်နိုင်တော့ပဲ..လီးထိပ်ကြီးဖြင့်.. မသီတာဖင်ကြားကို..ဆောင့်လိုး ထည့်လိုက်တယ်.. “”အို့..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ” လီးကို..မ သီတာလက်နဲ့လှမ်းကိုင်တာ.. စောက်ဖုတ်ဝမှာ.တေ့ပေးသည်.. ကျတော်လည်းဆောင့်လိုးထည့်လိုက်သည်.. “”ဗျိ..ဗျိ.ဇွိ ဇွိ..ဘွတ်..ဘွတ်..ပြွတ်..စွပ်..” “ဟ..အ..အား..ကျွတ်..ကျွတ်..ကျွတ်..ကျွတ်……..အောင့်မလေး..အမေ့..အောင့်မလေး..လေး….. အား..အား..အား…အီး..အီး..အွတ်.ဟင်း..ဟင်း”” ကျတော် ဆင့်ကာဆင့်ကာ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်.. စောက်ရည်တွေကလည်း ထွက်တော့… ”ဗြွတ်..ဗြွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..အု..အု..အား..ဒုတ်..”’ အဆက်မပျက်ဆောင်းလိုးနေတာ..မသီတာ..တယောက်..ဘာလုပ် ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတော့ဘူး…ကျတော့ရဲ့တင်ပါးတွေကို..
အတင်းဖတ်ပြီး..လက်သဲများနဲ့ကုတ်ဆွဲထားတယ်..အဲလို.. လက်သဲနဲ့ကုတ်လိုက်တော့..မသီတာ.. စောက်ဖုတ်ထဲက..ကျတော့လီး က.. သံချောင်းပမာ..ပိုမာကျောသွားသည်။ အားထည့်ပြီးဆောင့်တာ… “”ဘွတ်..ပြွတ်..အင့်..အား…” “””ဘွတ်..ပြွတ်…အင့်… အား.”’ “””ပြွတ်ဘွတ်…ပြွတ်…ဘွတ်..”’ မသီတာခဗျာ…ကျတော့…လိုးဆောင့်ချက်များ ကြောင့်..မျက်လုံးများမှေးစင်းပြီး.. နှုတ်ခမ်းများကို..ကိုက်ခဲကာ.. “”အင့်..အင့်..အား..အား..အမလေး…အိုး..အိုး.. ဟင့်..မြမ်မြန်နဲ့..ကြမ်းကြမ်း..ဆောင့်လိုးပေးပါ.. အား..အား..အင်း..အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်…. အ..အ..မင်းမင်းရယ်..ကောင့း်လွန်းလို့ပါ.. ဆောင့်ပါ…..အား…ပြီးတော့မယ်.. .ပြီး တော.့.မယ်..ဆောင့်ပါ…ဆောင့်လိုးပါ.. အား..အား..ဆောင့်..ဆောင့်..အားးးးး”’ မသီတာပြီးချင်နေတာ..ကျတော်သိသည်.. တင်ပါးများကို..ကော့ကော့ထိုးပြီး…. ကာမစိတ်တက်ကြွကာ.. အငမ်းမရဖြစ်နေသည်……. “”အား..အား..အား..အီး….နာနာ ဆောင့်..နာနာ ဆောင့်..မညှာနဲ့….အား..အင်း..
ဟင်း..အိုး..အိုး. ဘွတ်..ဗျစ်….ဇွိ….ပြွတ်…အမလေး..ကောင်း လိုက်တာ…အိုး..အိုး..လိုး..လိုး….အီး..ထွက်ပြီ……ထွက်ပြီး…… အား…..အမလေး..လေး..”’ မသီတာ..ပါးစပ်မှ..ရေရွတ်..မည်တမ်းရင်း .ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်….. နောက်ပိုင်း..မသီတာနဲ့..တ ခန်းထဲအိပ်ပြီး.. ညတိုင်းလိုလို..လိုးဖြစ်ကြသည့်။ပုံစံမျိုးစုံလို့တဲ့ အပြင်..မသီတာ..စောက်ဖုတ်ကို..စိတ်ပါလက်ပါ..နမ်းပေးသေး သည်..ကျတော့ရဲ့.အပြုအစုများ ကြောင့်..မသီတာ..မခံရ..မနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်..ဦးလေးပြန်ရောက်တဲ့ညက..အရက်မူးလာ သည်..ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ..အခန်းထဲတန်းဝင် ပြီး..မသီတာကို..လိုးပါသည်..ဦးလေးကပြီးသွား တော့…ပင်ပန်းလာလို့လားမ သိ..အိပ်ပျော်သွားတယ်….မသီတာ..အပြင်ထွက်လာပြီး…. “မင်းမင်း..မင်းမင်း..” အသံလေးအုပ်ပြီးခေါ်တယ်..နင့်..ဦးလေး က..ခဏလေးလိုးပြီး..အိပ်နေတယ် အမ..စောက်ပတ်က..အရမ်းယားနေပြီ.. လိုးရအောင်”’ဆိုပြီး…ရေချိုးခန်းထဲခေါ်သွား တယ်..ရေချိုးခန်းရောက်တော့…ဂါဝန်ကို..ချွတ်လိုက် ပြီး..နံရံကို..လက်ထောက်ကာ..ကုန်းပေးသည်…..ကျတောက်လည်း..တင်ပါး နှစ်ဖတ်ကိုင်ပြီး. .ဆောင့်လိုးလိုက်သည်..
“ဘွတ်..ဘွတ်..ဗြွတ်..ဗျိ..ဗျိ..” “”အား..အား..အင်း..အင်း..ဟင်း..ဟင်း..အိုး..” မသီတာကို..ဆောင့်လည်းလိုး..နို့တွေကိုလည်း..ကိုင် ကာ..တင်ပါးတွေလည်း..ရိုက်ပေးလိုက်သည်..”’အင်း..အားး….အား..အိုး..ဟင်း..” “လိုး..လိုး..ကောင်းတယ်..အား..အား..အမ လေး..”’ဟီး..ဟီး..ဟင်း..အား..အား..မင်းမင်းရယ့်..” လိုးဆောင့်နေရင်း..လီးကို..ချွတ်လိုက်သည်.. “”အို..ဘာလို့ချွတ်လိုက်တာ လဲ..” “”အမကို..ပိုကောင်းအောင့်လိုးပေးမလို့..” ဘိုထိုင်အိမ်သာပေါ်..ကျတော်ထိုင်ပြီး..အပေါ်ကနေဆောင်းခိုင်းသည်..နောက်က လည်းနို့တွေကို. ..ညှစ်ပေးလိုက်သေးတယ်..ဂုတ်သားလေးတွေကို..လျာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တော့..မဆောင့်တော့.ပဲ..ပွတ်လိုးလိုးနေ တယ်.. “”အား..အား..အင်း..ဟင်း..ဟင်း..” “”ကျွတ်..ကျွတ်..အို..အို…အ..မင်းမင်းရယ်..” “ကောင်းလိုက် တာ..အင်း..အင်း..ဟင်း..ဟင်း” “”အမ..ကောင်းလား.ကျတော်လိုးပေးတာ..” “”အရမ်းကောင်းတာပေါ့မင်းမင်းရယ်..အား..အား” “အမ ထလိုက်..ဘိုထိုင်မှာ..လက်ထောက်လိုက်” မသီတာ..တင်ပါးကြီး..ကော့ထားတော့..မလိုး သေးပဲ..တင်ပါးကို၂ချက်၃ချက် ရိုက်ပြီး..
လက်ကို မှောက်ခုံထားကာ..မသီတာ..စောက်ဖုတ်ကြီးကို..နှိုက်သည်..မသီတာ..ကော့တက်သွားသည်….လက်ကို..အသွင်းအ ထုတ်လုပ်ပေးရင်..စအိုလေးကို..လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်ရာ…မသီတာ.ထွန့်ထွန့်ကိုလူးနေသည်…. “အ..အို..အိုး..ဟင်း..ဟင်း..အင်း..” “အမလေး..မင်းမင်းရယ်..ဟင်း..ဟင်း” “ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကွာ..အိုး..အိုး.. အမ..မရ တော့ဘူး..အား..အား..လိုးပေးပါတော့..” မတ်တက်ရပ်ပြီး..မသီတာ.တင်ပါးကြီးကို.. လီးနဲ့.၃..၄ချက်ရိုက်ပေးလိုက်တော့..ရမ္မက်ခိုး ငွေ့တွေအပြည့်နဲ့ကျတော့ကိုကြည့်လာတယ်.. နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းစုပ်ပေးပြီး.. “လိုးပေးတော့မယ်နော်” မသီတာ..ခေါင်းလေး ညိတ်ပြီး..လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးတယ်..တင်ပါးထိပ်ကကိုင်ကာဆောင့်လိုးထည့်လိုက်သည်.. “အား..အား..အား..အမ လေး..အား..ဟင့်..ဟင့်….အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..ကောင်းတယ်..ကောင်း.. တယ်..အား..အား. .ဘွတ်..ဘွတ်..စွပ်..ဖတ်..ဖတ်..ဗြွ တ်..အ..အ..အိုး..လို.း.လိုး..ဆောင့်..ဆောင့်…အားပါးပါး..ဘွတ်..အား..အိ..ထိတယ်..ထိတယ်..
အမလေး..အမလေး..အာ.း..မင်းမင်း..မင်းမင်း.. ဆောင့်..ပြီးပြီ..ပြီးပြီ..အ..အ..အ” မသီတာပြီးသွားသလို..ကျတော်လည်း..မ သီတာ..စောက်ခေါင်းထဲ..သုတ်ရည်များ.. ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်…. ဦးလေး..အလုပ်ရှာပေးတာ..အိမ်ကားမောင်းအလုပ်ရ သည်..နေ့ဘက်မောင်းပြီး..ညဘက်ဦးလေးအိမ်မှာပြန်အိပ်တယ်..၃..၄လကြာတော့…မသီတာမှာ..ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်..ဘယ်သူ့ ကိုယ် ဝန်လည်း..အတိအကျမသိပေမယ်.့.ကျတော်တို့တူရီးနှစ်ယောက်ရဲ့..ကိုယ်ဝန်တော့သေချာပါ တယ်…ဦးလေးကလည်း မကြာခဏ..ခရီး ထွက်သလို..အလုပ်ရှင်သဌေးကလည်း..နိုင်ငံခြားမကြာခဏသွားတယ်…ဘော့စ်ခရီးမထွက်ခင်ညဆို..ဦးလေး အိမ်မပြန်ရပဲ..ဘော့စ်အိမ်မှာသာ .အိပ်ရသည်..ကျတော့..ဘောစ့်က..နိုင်ငံခြားနဲ့ ဖက်ဆက်အလုပ်..လုပ်တယ်နဲ့တူ တယ်..အစည်းအဝေးလည်းတက်ရတယ်..ဘော့စ်မိန်းမနာမည်
“နွယ်နွယ်ဝင်း”တဲ့..မမဝင်းလို့ပဲ..ခေါ်ကြတယ်… ကိုယ်ဝန်၅လကျော်ရှိတယ်…ဗိုက်က.. အနည်းငယ်..ပူနေပြီ….ကိုယ်ဝန်သည်အ ကျီ င်္တွေ ဝတ်ရင်..ဖြူဖွေးနေတာပဲ..သူဌေးဆိုပေမယ့်.. တန်းတူဆက်ဆံတယ်..ခုလည်းဘော့စ်ခရီး ထွက်တော.့အိမ်မှာနေပေးဖို့မှာ တာနဲ့….ဦးလေးအိမ်မပြန်ရတော့ဘူး…အိမ်ကိစ္စကူလုပ်..မမဝင်းအပြင်ထွက်ချင်လိုက်ပို့နဲ့..အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်..မမဝင်းနဲ့လည်း အရမ်းကိုရင်းနှီးနေပြီ…ပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်နေပြီ..တနေ့တော့..မမဝင်းကငို နေတယ်..ဘာလို့လဲမေးလိုက်တော့..ဘာမှမ ပြော ဘူး… “”မမဝင်းရယ်..မငိုပါနဲ့ဗျာ…” မျက်ရည်တွေသုတ်ပေးနေတယ်….အသားလေးကလည်းတော်တော်နူးညံ့တယ်ဗျ..ဟိုပွတ်ဒီ ပွတ် လုပ်ပေးရင်း.မမဝင်းက..ဘာမပြောညာမပြောနဲ့….ကျတော့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်တယ်..ကျတော် လည်း..လျှာနဲ့ပြန်ကလိ ပေးလိုက်တယ်….နို့တွေကလည်းကိုယ်ဝန်ရှိလို့လားမသိ..တော်တော်ကြီးတယ်..အကျီ င်္ပေါ်ကရွရွလေးပွတ်ပေးနေတယ်… “”မင်း မင်း..မမဝင်းကို..အထင်သေးသွားပြီလား..”
“အထင်မသေးပါဘူး..မမဝင်းရယ်..ပုထုဇဉ်ပဲ.. အမှန်တိုင်းပြောရရင်..မမဝင်းကို..လိုးချင်နေတာ ကြာပြီ…” “ဘာလို့လဲ.” “”မမဝင်း အသားအရည်တွေရယ်..ဖူးယောင်နေတဲ့…….နှုတ့်ခမ်းလေးတွေရယ်….မမဝင်းရေချိုးရင်တွေ့ရတဲ့..ဖင်သားကောက်ကောက်ကြီး တွေကို…စိတ်နဲ့မှန်းပြီး..လိုးချင်နေတာပါ” ပြောရင်း..မမဝင်းဂါဝန်ကိုချွတ်လိုက်တော့.. ဗိုက်ကပူပူလေး..ဆိုဖာပေါ်မှာပဲထိုင်ခိုင် ပြီး…အသာလေးလှဲလိုက်ပါတယ်…ပေါင်လေးကိုကား လိုက်ပြီး..ပြဲအာနေသော..စောက်ဖုတ်လှလှလေးကို..လျှာနဲ့..ယက်လိုက်ပါ တယ်…. “”အို..မင်းမင်း..မလုပ်နဲ့လေ…ဖုန်းနိမ့်မှာပေါ့..” ပေါင်ကိုအတင်းစိထားပါတယ်…ပေါင်းသားလေးတွေယက်…ပြူးထွက်နေ တဲ့အဖုတ်ကို..ယက် နေတော့..စိထားတဲ့ပေါင်က..တဖြည်းဖြည်းကားလာပါတယ်…ပေါင်ဂွစုံကိုယက်…စအိုနဲ့စောက် ဖုတ်တောက်လျောက်ယက်ပေးလိုက်တော့..
မမဝင်း..တင်ပါးကြီးတွေကော့တက်လာတယ်…အဲခါကျမှ..စောက်ဖုတ်ကို..အလျားလိုက်.. ယက်ပေးလိုက်…စောက်စေ့ ကို.လျှာထိပ်နဲ့ထိုး… တခါတခါ..စုပ်လိုက်နဲ့..လုပ်နေတာ… “အိုး..အိုး..အား..အား..အမလေး…ဟင်း..ဟင်း.. မင်းမင်း…အား..အား… ကျွတ်..ကျွတ်..ဟင်း..အို” မမဝင်း..အရမ်းကောင်းနေပြီ…ကျတော်လည်း..လက်သူကြွယ်…လက်ခလယ်ကို.. ပက်လက်ထား ပြီး..မမဝင်းစောက်ဖုတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်..လက်နှစ်ချောင်းက..အတွင်းသား များကို..လိုက်စမ်းနေသလို..ဟိုဖိ..ဒီဖိလုပ်ပေးနေ ပါတယ်….စောက်စေ့ကိုလည်း..စုပ်လိုက်. ယက်လိုက်နဲ့..ဘယ်လက်ကလည်း..မမဝင်းရဲ့..နို့သီးလေးကို..လှမ်းကိုင်ထားသေးတယ်.. မမဝင်းခဗျာ.. “ဟင်း..ဟင်း..အင်း..အင်း..အား.. ကျွတ်..ကျွတ်.. “အမလေး..အား..အား.. ဟင်း..မင်းမင်း..ဟင့်. ..မရတော့ ဖူး..အား..အား.. ထွက်ကုန်ပြီ..ထွက်.. ထွက်…အား..အ..အ…” မမဝင်း..တဆက်ဆက်တုန်ခါပြီး.. စောက်ရည်များကို..ကျတော့ မျက်နှာပေါ်.. ပန်းထုတ်လိုက်ပါသည်.. ဆက်လက်ထွက်နေတဲ့.. စောက်ရည်လက်ကျန်များကိုလည်း… လျှာနဲ့သိမ်းယက်ပေးလိုက် ပါသည်
ကျတော့လုပ်ရက်ကို ကြည့်ပြီး..မမဝင်းက..အားတုံ့အားနာနဲ့.. “မင်းမင်းရယ်..အားနားလိုက်တာ… မမဘဝမှာ.. ဒါပထမဆုံး..အနမ်း ခံဖူးတာပဲ… ရင်ထဲမှာ..ပြောပြမတက်အောင်.. အရမ်းကောင်းလွန်းတယ်ကွယ်.” ထိုသို့ပြောရင်း..ကျတော့လီးကို.. ဂွင်းထုပေးနေ တယ်… “မင်းမင်း..မမကိုလိုးချင်နေပြီလား…” “မလုပ်ပါနဲ့..မမဝင်းရယ်..ဗိုက်ထဲကလေးကို ထိသွားပါ့မယ်…” “”အို..ဘာဆိုင်လို့ လဲ..မင်းမင်းရယ်.. ထိတယ်ဆိုတာ..အရမ်းကြမ်းမှပါ.. ညင်ညင်သာသာလိုးရင်ရတယ်..” “”မမဝင်းက ရင်သွေးလွယ်ထားတော့.. အလိုးခံချင်စိတ်ရှိလို့လား” “ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမင်းမင်းရယ်… မမ.ယောက်ကျားတောင်.. မဖြစ်မနေမို့ လွတ်လိုက်တာ..မ မွေးမချင်း.. ဘယ်မှသွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူး… အဲဒီအမွေးခင်အချိန်ထိ.. အရမ်းကို..အလိုးခံချင်တာ.. မိန်းမတိုင်းနီးပါးပဲ”’ “”ဪ..ဟုတ်လား..မမဝင်း..ကျတော်က.. ကိုယ်ဝန်ရှိ ရင်လိုးမရဘူးထင်နေတာဗျ..” “”လိုးမရဘူးဆိုတာ..ကလေးမွေး ပြီး..၁လခွဲ..၂လလောက်ကိုပြောတာ…သွေးနုသားနုတဲ့ အချိန်ပေါ့.အချို့လည်းလိုးတယ်.. မိန်းကလေးကိုထိတာပေါ့…”
“”မင်းမင်းလီးက.မကျဖူးနော်… အရမ်းလိုးချင်နေလား..လိုးတော့လေ..” ပြီးတော့..မမဝင်းက..ကျတော့အတွက်.. ပုဇွန်ထုပ် ပုံစံ..ကွေးကွေးလေး..နေပေးထားတယ်..တင်ပါးလေးအသာတွန်းပြီး.. လီးကိုတစ်ဝက် ထည့်ပြီး..ဖြည်းဖြည်းပဲ..လိုးပေးနေတယ်.. ခဏနေတော့..စောက်ရည်တွေ လိုက်လာပြီး.. “မင်းမင်းအဆုံးထိလိုး..ရတယ်.မညှာနဲ့..လိုး” ခါးအားပြုပြီး..ကပ်ညှောင့်ပြီး လိုးပေး နေတယ်.. “ဘွတ်..ဘွတ်..ပြွပ်..ပြွတ်..” “အား..အား..ဟင်း.ဟင်း ကောင်းတယ်..လိုးပေး.. ဟင်း..ဟင်း..အို..အိုး မင်း မင်း..အား..အာ.း…ကျွတ်..ကျွတ်.. .မမစောက်ဖုတ်ထဲ..လီးရည်ထည့် နော်..အား..အား….လိုး..လိုး..မမပြီးတော့မယ်…အား…. ကောင်းတယ်….အား….မင်းမင်းရယ်.. လိုးတက်လိုက်တာ… ဟင်း..ဟင်း…ကျွတ်..ကျွတ် ကောင်း တယ်..ဆောင့်..ဆောင့်..အား…..အား….”မမဝင်းက..အော်လေ.. စောက်ပတ်ကြီးက..ကျဉ်းသွားလားမသိဘူး..လီးကို..ညှစ်ညှစ် ထားတယ်..အချက်၂၀လောက်..ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီး… မမဝင်း..စောက်ဖုတ်ထဲသုတ်ရည်. .ပန်းထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဘော့စ်မ လာခင်အချိန်ထိ..မမဝင်းရဲ့.. စိတ်လိုအပ်ချက်တွေကို..နေ့ညမပျက်.. ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။ဘော့စ်ပြန်လာ တော့..ကျတော့ အတွက်..လက်ဆောင်များယူဆောင်ခဲ့ပါ သေးသည်။
ကျေးဇူးတင်စကား.. ပြောဆိုပြီး နောက်ဖေး၌အအေးဖျော်နေသော.. မမဝင်းဆီသွား၍..အာဘွားပေး. နှုတ်ဆက်ကာ. .ဦးလေး အိမ်..ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ရောက်တော့..ဦးလေးနဲ့တန်းတိုးတာပဲ.. “မင်းပြန်လာတာနဲ့အတော်ပဲ..ငါနက်ဖြန်ခရီးထွက်ရ မှာ..မင်းအမက.. ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ညရေးညတာ..စိတ်မချဘူး…. လိုအပ်တာ.လုပ်ပေးလိုက်ပါကွာ…” “စိတ်ချပါ..ဦးလေးရာ.. ကျ တော်ဂရုစိုက်ပါ့မယ်.. စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သွား…”’..စိတ်ထဲကတောင် နာမည်ပေးလိုက်သေးတယ်.. ”’ဪ..ငါ့ဘဝက ဗိုက် စောင့်(ဆောင့်)မင်းမင်းဖြစ်နေ ပါရောလား””’.. “မမသီတာရယ်..သတိရလိုက်တာ..” “တူတူပါပဲ..မင်းမင်းရယ်..” မသီတာနောက် က ခွထိုင်ပြီး..ဗိုက်ကိုပွတ်ပေးနေတယ်… ဘော်လီဝတ်မထားတော့..နို့တွေပါကိုင်ပေး. .ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကိုလည်း..နမ်း ဂုတ် သားကို..လျှာနဲ့ယက်လိုက်တော့.. မသီတာမနေတက်တော့ဘူး.. “အို..မင်းမင်း..ယားတယ်ကွယ်.. အိုး..အိုး..ကြည့်ပါလား..ဟင်း… ဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်…” မသီတာ..စောက်ဖုတ်ကို..ကိုင်တော့… စောက်ရည်တွေ..ရွှဲနေပြီ…. “”အမ..စောက်ရည်တွေ..ထွက်နေပြီ.”.
“”မထွက်ပဲနေမလား…ကလိနေတာကိုး.. အခန်းထဲသွားရအောင်..နော်..” အခန်းထဲရောက်တော့.. မသီတာကိုအရင်ချွတ် ပေးလိုက် တယ်..ကျတော်က.. အတွင်းခံမှလွဲ၍ ကျန်တာ..ဘာမှ..ရှိတော့ဘူး..ကုတင်ပေါ်.. ပက်လက်လှန်ခိုင်းလိုက်တယ်… စောက်ဖုတ်လက် နဲ့ကလိပေး. ကျန်လက်ရဲ့လက်မက. .စောက်စေ့ကို..ဖိဖိပြီးပွတ်ပေးနေတယ်.. စောက်ပက်နှုတ်ခမ်းတွေကို.. လျှာနဲ့ယက်ပေး လိုက်..စောက်စေ့ကို..စုပ်လိုက်.. သွားနဲ့ကိုက် လိုက်လုပ်ပေးနေတော့.. “ဟား..ဟင်း..အား..အား..အို..အို..” “ကျွတ်..ကျွတ်..ဟင်း..ဟင်း..အ” “မမသီတာ..ကျတော့လီးကို.. နမ်းပေးပါလား..” ကုတင်ပေါ်တက်..မက်တက်ရပ်.. မသီတာရှေ့ မှာရပ်နေလိုက်တယ်.. မသီတာက..အတွင်းခံပေါ်ကနေ.. ကျတော့လီးကို.. ပျော့ပြောင်းတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေ.. ပွတ်သပ်ပေးနေ တော့.. ပြီးတော့..လက်မနှစ်ချောင်းနဲ့အတွင်းခံကို.. ချွတ်လိုက်တော့.မြွေပုစဉ်း ထောင်လာသလို.. ငေါက်ကထဲ..ထွက်လာ တယ်..လီးကိုဘယ် လက်နဲ့ကိုင်ပြီး..လဥကို..လျှာနဲ့ယက်ပေးနေ တယ်..ယက်လို့ …ဝသွားတော့..လီးနဲ့.. သူ့ပါးစပ်ကိုရိုက်လိုက်သေး တယ်.. ဒစ်ကို..အသာငုံလိုက်.. လျှာနဲ့ယက်လိုက် ဆီးပေါက်ကို..လျှာထိပ်နဲ့ထိုးလိုက်… လီးဒစ်ကိုငုံထားရာကနေ..လီးတချောင်းလုံး. စုပ်လိုက်တော့
“အို..အမ..အား..အား..” “ကောင်းတယ်..အမရယ်..”.. ..ပြောကာမှာ..အဆက်မပြက်ကိုစုပ်နေ တော့တယ်.. ကျတော်လည်း ကောင်းလာတော့.. ဆံပင်တွေကိုင်..လီးကို..မသီတာပါးစပ်ထဲ.. ကော့ကော့ထိုးပေးနေတယ်..အာခေါင်တွေ.. ထိုးမိ တော့.”ဒုတ်..ဒုတ်..”နဲ့….သုတ်.. မနဲကိုထိမ်းထားရတယ်.. “မသီတာ..ကျတော့ကို..အပေါ်ကလိုးပေး” “ဖြစ်ပါ့မလား..မင်းမင်း ရယ်…” “သိပ့်ဖြစ်တာပေါ့..” ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တော့.. အပေါ်ကတက်ခွ..လီးကိုကိုင်.. သူ့စောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီး.. ထိုင်ချလိုက် တယ်.. “ဇွိ..ဇွိ..ဘွတ်..ဘွတ်..ပြွတ်ဗြွတ်” “အိ..အား..အား..အမလေး..” ဗိုက်ထောက်နေတော့.. လက်ထောက်လို့မရဘူး ဖြစ်နေ တယ်..ခြေထောက်အားကို.. အသုံးပြုဆောင့်ပေးနေတယ်.. “ဘွတ်..ဘွတ်..ဗြွတ်..စွတ်..အား..အား ဟင်း..ဟင်း..အမလေး… လေး..အား..အီး” ဆောင်တာခဏရပ်ပြီး…ဟာ..အင်း..မောလိုက်တာ..မင်းမင်းရယ် မင်းမင်း.တလှည့်လိုးပေးဦ.း”
မသီတာကို..ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး.. ကျတော်ကုတင်အောက်..ဆင်းလိုက်တယ်.. ပေါင်နှစ်ဖက်အသာဖြဲ….မသီတာ.. စောက်ဖုတ် ကို..ကုန်းယက် လိုက်သေးတယ်…ပြီးတော့.. စောက်ခေါင်းဝလီး တေ့ဆောင့်လိုက်တယ်..”ဘွတ်..ဗြွတ်. .ဗျိ..ဒုက်” “အား..အမ လေး..ကြမ်းလိုက်တာ မင်းမင်းရယ်” “အင်း..အင်း..အား..အား..အိုး..အင်း..ဟင်း ကျွတ်..ကျွတ်..အား..အား..ကောင်းတယ်… အ..အား…ဆောင့်..ဆောင့်..အမလေး.. လိုး..လိုး” လီးခဏချွတ်ပြီး..မသီတာကို.. တစောင်းအနေအထား..ပြုပြင်လိုက်တယ်.. ပြီး တာနဲ့..လီးတေ့.. ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တယ်.. “အား..အား..အားရလိုက်တာ…အင်း..အင်း..လိုး…လို့..အမလေး…အ ဟင့်….အီး..အင်း….လိုး.
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အနျတီ သီတာ